Cudurka Shuban-biyood oo ku faafay deegaamo cusub, kuna laayay Caruur | Somaliland.Org
Cudurka Shuban-biyood oo ku faafay deegaamo cusub, kuna laayay Caruur
March 29, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Caruurta uu soo ridayo Cudurka Shuban-biyoodka ee deegaamo kala duwan oo Somaliland, ayaa isa soo taraya, iyada oo ay ku dhiteen laba Caruur ah, ka dib markii uu ka dillaacay magaalooyinka Hargeysa iyo Balli-gubadle.
Cudurka Shuban-biyoodka oo hore lix Caruur ah ugu dilay tuulada Toon oo 18-Km dhinaca Koonfurta ka xigta Magaalada Hargeysa, isla markaana haleelay in ka badan 80 kale, ayaa sidoo kale ka dillaacay magaalada Hargeysa iyo Balligubadle ee gobollada Maroodi-jeex iyo Hawd, halkaas oo uu 2 Caruur ah ku dilo, isla markaana ay u jiifaan tiro kale oo badani.
Caruurtan yaryar ayaa ku dhintay magaalada Balligubadle, ka dib markii iuu halkaa ka dillaacay Cudurka Shuban-Biyoodku. Masuuliyiinta degmada Bali gubadle ayaa xukuumada Somaliland Iyo Hay’adaha caalamiga ah ka dalbaday in gurmad deg deg ah lala soo gaadho carruurta u jiifta xanuunka shuban biyoodka. Waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani uu ka jiro degmooyinka Sayla-Bari iyo Balli-cabbanne oo uu soo ritay carruur badan.
Xukuumadda Somaliland ayaa tan iyo intii uu dillaacay Cudurkani aan qaadin tallaabooyin ay dadka kaga wacyigelinayso khatarta Cudurkan iyo sida looga gaashaaman karo, taa bedelkeedana marka uu dhimasho iyo khasaare geysto ay goobaha gaadhsiiyaan taakulo.
Previous PostMadaxii Nabad-sugidda Gobolka Togdheer oo ka hadlay sababaha uu isu-casilayNext PostWararkii u dambeeyay ee Rag qaarkood Ajaanib yihiin oo Maxkamad loo saaray eedo Argagixisanimo	Blog